Luqadaha - AfricArXiv
Qiyaastii 2000 oo luuqadood oo maxalli ah ayaa looga hadlaa Afrika. Senegal, Nigeria iyo Kenya ayaa maalgashanaya kor u qaadista iyo xoojinta luqadaha afka-ka-baxa. Awoodda noocan oo kale ah ee faafinta macluumaadka ayaa weli ah mid ay ka faa'iideysaneyso bulshada cilmi-baarista sayniska ee qaaradda Afrika waqtigaas. Waxaan u maleynaynaa inay dad badani u janjeeraan inay la wadaagaan aqoon haddii ay fursad u leeyihiin inay sidaas ku sameeyaan afkooda hooyo.
Soo Koobid Ingriis iyo Faransiis
Fadlan ku bixi qoraal kooban oo ku qoran Faransiis / Ingiriis oo ay la socdaan diyaarinta si loo jabiyo farqiga luqadeed ee u dhexeeya francophone iyo anglophone Africa.
Tarjumaadda ayaa si otomaatig ah loo isticmaali karaa iyadoo la adeegsanayo Google turjumi or DeepL - taas kiiska fadlan kudar qoraal, sida "Toos loogu tarjumay [Google Translate / DeepL]".
Luuqadaha maxalliga ah
AfricArxiv waxaa loo adeegsan karaa maareynta mashruuca luuqad maxalli ah (faallooyin la soo aruuriyay) si qoraal gacmeedka loogu soo gudbiyo goob gaar ah oo ku qoran af Ingiriis.
Waxaan dhiirigelineynaa gudbinta luqadaha ay badanaa isticmaalaan bulshada cilmiga ah ee ka jirta dalka, sida Ingiriiska, Faransiiska, Sawaaxiliga, Zulu, Afrikaans, Igbo, Akan, ama luqadaha kale ee Afrikaanka ah. Qoraallada gacanta ee lagu soo gudbiyo luqadaha aan Ingiriisiga ahayn waxaa lagu qaban doonaa safka qunyar-socodka illaa aan ka xaqiijin karno. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad soo jeediso dadka kaa caawin kara isku-dheellitirka luqaddaada.
Tarjumida qoraallada qoraalka
Kahor intaadan bilaabin la xiriir qorayaasha maqaalka asalka ah oggolaanshahooda hore iyo kan la wargeliyey.
Cinwaanka ugu weyn waa inuu noqdaa cinwaanka la tarjumay; oo tilmaamaysa in tani ay tahay tarjumaad qoraal gacmeed jira (tusaale [SW> EN] oo ay ku xigto cinwaan la tarjumay oo laga soo turjumay Swahili ilaa Ingiriisi). Kudar cinwaanka asalka asalka cinwaan ahaan si tarjumaada lakala helo. Xiriirinta dukumiintiga asalka ah ee asalka ah oo leh cadeyn tarjumaad waa in lagu daraa bogga koowaad.
Ku dar metadata dheeri ah oo laxiriirta.
Luuqadaha Afrikaanka websaydhkeena
Miyaad aragtay inaad u beddelan karto luqaddayada websaydhada inay ku hadlaan luuqadaha Ingiriiska, Sawaaxiliga, Xhosa ama Amaranth marka loo eego luqadaha kale ee looga hadlo qaaradda?
Websaydhka 'AfricanArXiv' waxaa si toos ah u tarjumay GTranslate.io iyada oo loo marayo wp plugin Ingiriisiga ah illaa 19 luqadood. Tarjumida waa mid wanaagsan laakiin aan qummaneyn taasina waa sababta…: Waxaan raadineynaa mutadawiciin naga caawiya hagaajinta qoraalada la tarjumay ee websaydhkeena. Si aad uga qeybqaadato dadaalka bulshada fadlan iimayl ugu dir gacansare@africarxiv.org.
Waqtigaan la joogo, waxaan ku bixinnaa tusmadayada luqadaha soo socda:
Faransiiska Jarmal Hausa Hindi Igbo
malagasy Portugal sesooto somali Sunda
Sawaaxili Xhosa Yoruba Zulu
Noo soo dir email ah in laga caawiyo tarjumida mid kasta oo ka mid ah bayaanka hoos ku taxan iyo talaabooyinka la xiriira kala duwanaanta iyo ku darista Tacliinta Sare, cilmi baarista iyo daabacaada tacliinta:
. Ka fikir Hubinta Gudbi
. Hindisaha Helsinki